Ukuphela okusikiweyo emadodeni-Imfashini kunye nokuhamba kwamadoda ngeSitayile | Amadoda aQinisekileyo
Kwiminyaka emininzi ngoku ukuphela okusikiweyo emadodeni iseyeyona ifunwa kakhulu kubo bonke abalungisa iinwele. Luhlobo lokusikwa okuphelileyo kubonakala ngathi kwahlukile, ngokungathi kukusikwa okukhethekileyo, kodwa kulwakhiwo abalufumanayo ezahlukeneyo ezininzi.
Ubume bayo bunembonakalo ecekeceke, enamacala achetyiweyo kunye neenwele ezinde kancinci entloko. Zonke ezi zinto zisikiweyo zithandwa kakhulu kwaye ingqokelela yazo zifunwa kakhulu ngabo bonke abalungisa iinwele kwaye ukusika iingcali.
1 Ukuphela okuphantsi
2 Phakathi kokuphela
3 Ukuphela okuphezulu
4 Sika ulusu luphele
5 I-razor iyaphela
7 Uyenza njani loo nto yokuSikwa kweFade?
Siza kufumanisa iintlobo ezahlukeneyo zokusika okupheleyo, zonke zimfutshane njengesitayile Ukuphela okuphantsi, kodwa lo ngokukodwa unokusikwa okuninzi ezantsi kwaye ziphele. Umphezulu mde kakhulu, ngevolumu enkulu kunye nokusikwa kwecala kunqunyulwe ngombala oqala ezantsi kwentloko.
Oku kunqunyulwa bekusezintloko zamadoda kwizizukulwana ezininzi, kuye kwaba yinto eyenzeka kumashumi asibhozo kwaye namhlanje isabonisa amandla amnandi kakhulu.
Oku kunqunyulwa kukwisitayile esiphelayo. Inika nokusikwa okugqibeleleyo okunokusetyenziswa kakuhle ngesitshetshe elungileyo. Kuhamba ngokugqibeleleyo ngeindevu ezicociweyo ezihambelana nomthamo kunye nenxalenye echetyiweyo yeenwele.
Uhlobo lwayo olusikiweyo luyi-gradient apho ukungalingani kwayo kuhambelana apha ngezantsi ukusuka kwiitempile nangaphezulu kwendlebe, ukusikwa ngokugqibeleleyo kweemilo zentloko ze-oval. Ukuphela okuphakathi Ungaqala nge-gradient ekuphakameni okuphakathi kwi-nape yentamo kwaye uqhubeke nomgca wayo kwindawo yamashiya. Inokudityaniswa ngokugqibeleleyo neendevu apho unokukhetha khona iindlela ezahlukeneyo ezinje ngeentsuku ezintathu zentshebe okanye isilevu sesitayile seHipster.
Yile Fade isikiweyo kodwa ngaphezulu kunomahluko odlulileyo. Ngokuqinisekileyo ikhumbuza onke amadoda anokusikwa okuphezulu angamaCaucasian, amaAfrika okanye isitayile saseAsia sokusikwa kwakhe. Inxitywe kakhulu yindoda yanamhlanje kwaye ithambeka liphezulu kakhulu.
Inxalenye ephezulu yentloko ime ngaphandle kwevolumu apho iphezulu kakhulu. Le iinwele zinxitywa ngabafana abancinci, abakhoyo ngoku nabathanda ukuba kwimfashini. Singayibona kakhulu kubadlali bebhola ekhatywayo, kuba inika ulutsha ngakumbi, umfanekiso onobuqili, iprojekthi yokuhlaziya kwaye inika ukukhanya ngakumbi ebusweni.
Sika ulusu luphele
Uhlobo lwakhe luhlala lubekwe njenge ukusika umlutha, enganyamalaliyo ekuhambeni kweminyaka kwaye ngaphandle kwenjongo yokwenza njalo kwezi zilandelayo eziqhubekayo. Oku kunqunyulwa kuqala kwiindawo eziphakamileyo ezahlukeneyo zentloko: eziphakamileyo, eziphantsi okanye eziphakathi ekunikezeni ukusika okungaphezulu kakhulu kunangaphambili. Le ndlela iya yomelela kwaye inikwe loo nto cut so shaved to the hair edibanisa nolusu.
Ukuvela kwayo kuninzi iqhubele phambili ngakumbi kwaye yavela kunezinye iigradients. Umsebenzi wakhe kukucheba intloko ngencakuba kwaye ushiye indawo yecandelo lokucheba liye kwi-zero. Ke ihlaziyiwe kugqithisile, ukufikelela kubude obufunekayo bentloko. Le nwele isebenza kakuhle kuzo zonke iintlobo zeenwele, nokuba zithe tye, zigobile okanye zijiyile. Iindevu zikwaphawula olo hlobo lubonakalisa ngalo Razor Fade.
Le ndlela yokuluka iinwele iya kugqithiso lokunxiba ukusikwa okubaxekileyo ngokufutshane kangangokuba kujongeka ngathi luhlobo Intloko ecekethekileyo. Iqala phakathi kwe-axis yetempile kwaye ifike ekuqaleni kwethambo le-occipital. Nxiba okusikiweyo kukufikelela kumda yeenwele zezinwele kwaye ibonakaliswa ngokugcina inkangeleko ngokutsha okukhulu.
Uyenza njani loo nto yokuSikwa kweFade?
Uhlobo olonakeleyo lwe Ukuphela okusikiweyo Akunzima ukuyifumana. Singa sikhokele ngesitshetshe kwaye uqale ngenani u-0 kokubini kwi-sideburns, kunye nasemacaleni nasemva kwentloko.
Siza kusika ezinye iindawo nge Isitshetshe ukuya kwi-0,5 kwaye uyenze ibe mfiliba kunye nendawo yokusika yokuqala. Emva koko unokwenza isikhokelo inombolo 1 kwaye ekugqibeleni ugqibe nge inani 2. Ngalo lonke ixesha sisuka kwelinye inqanaba siye kwelinye kufuneka sigqibe imigca eyahlula inqanaba elinye kwelinye.
Ukufumana i-Fade cut esizinikele kwisitayile sakho, kuya kufuneka uye kunwele weenwele okanye kwindawo yokucheba iinwele, ukuze ucebise ukuba loluphi uhlobo lokuphela olulungele wena.
Ukhe wajonga njani kukho ukusika okuphantsi, okuphakathi okanye okuphezulu ukuphakama Kwaye nokunye ukusika kuya kugqithisile. Ungalibali ukuba ukudlala ngegradients kunye nemizobo kunokunceda amanye amadoda ukuba agubungele iziphene ezithile ezinje ngezikrelemnqa okanye amaqhuma.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Isitayile esinenwele » Ukuphela kusikiwe endodeni